FromLinux, G +, Facebook နှင့် Twitter ပေါ်တွင်;) | Linux မှ
မင်းသိသလား ... မင်းလိုက်လို့ရတယ် <° Linux မှ Facebook က, တွစ်တာ o Google+ မှာ 😀
မင်းကဒီမှာနောက်ကိုမလိုက်တော့ဘူး၊ နေ့စဉ်သုံးဖြုန်းခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးများကိုဖတ်ခြင်း၊ သင်လည်းလုပ်နိုင်သည် အီးမေးလ်ဖြင့်စာရင်းသွင်းပါ ညာဘက်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဘားရှိဝစ်ဂျက်တစ်ခုမှတဆင့်:
သို့သော်ထိုမျှမက။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်အကောင့်မှလည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုလိုက်နာနိုင်သည် တွစ်တာ, Facebook က သို့မဟုတ်ပင်လူကြိုက်များ Google+ မှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်များလင့်များရှိပါသည်
<Facebook တွင် Linux
ဂူဂယ်လ် + တွင် Linux ရှိသည်
<တွစ်တာတွင် Linux ရှိသည်
တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်တို့ကိုအခြား ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုတွင်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်စေချင်သည်ဆိုပါက၎င်းကိုသာပြောရန်လိုအပ်သည်။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ဆက်ဆံသောကျွန်ုပ်တို့၏သူငယ်ချင်းအားထိုအကောင့်ကိုဖွင့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တောင်းဆိုလိမ့်မည်။
သင့်အားစိတ်သက်သာစေရန်အမြဲတမ်းကြိုးစားပါမည် <° Linux သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောလူမှုကွန်ယက်မှတဆင့်သင်ကိုယ်တိုင်ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် will ရောက်ရှိလိမ့်မည်
ဤအကောင့်များကိုဂရုစိုက်သော၊ အကောင့်များနှင့်အခြားသူများကိုစီမံခန့်ခွဲသောသူငယ်ချင်းအားကျေးဇူးတင်ပါသည် Elav ကျွန်ုပ်၏လူမှုရေးကွန်ရက်များဝင်ရောက်ရန်ကျွန်ုပ်အတွက်ခက်ခဲလွန်းသဖြင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်
ကောင်းပြီ၊ ထပ်ဖြည့်စရာမလိုပါ၊ ကျွန်ုပ်အမြဲပြောသကဲ့သို့အိုင်ဒီယာသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်၊ တိုင်ကြားချက်၊ သံသယ၊ မေးခွန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FromLinux » Linux မှ G +, Facebook နှင့် Twitter;)
ချစ်ခင်ရပါသော - Diaspora နဲ့ Identi.ca မှာစာမျက်နှာတွေဖန်တီးရတာကောင်းပါတယ်။ Desdelinux.net ရဲ့ content တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ Geek အသုံးပြုသူတွေအများကြီးရှိပါတယ်
အိုကေ၊ အခုငါတို့ဆီမှာအကောင့်ဖွင့်ဖို့သူတို့ကိုတောင်းဆိုနေတဲ့အီးမေးလ်ကိုပို့နေတယ်။ အဲဒီနောက်မှာငါတို့တင်ပို့လိုက်တဲ့အရာများအားလုံးအဲဒီမှာထွက်လာနိုင်အောင်သူတို့ကိုကွန်ရက်စာမျက်နှာနဲ့ဘယ်လိုပေါင်းစည်းမလဲဆိုတာငါမြင်ရလိမ့်မယ်😀
စကားမစပ်, diaspora URL ကိုကဘာလဲ? ^ _ ^ ဦး
@adalberto - သူတို့ရဲ့ ISP က Face and Twitter ကိုကြည့်ခွင့်ကိုငြင်းပယ်လိုက်တာကြောင့်သူတို့ဟာ Diaspora ကိုစမ်းကြည့်နိုင်တယ် (http://joindiaspora.com) သည်သင်၏အချက်အလက်များကိုမသိမ်းဆည်းထားသောလုံးဝလွတ်လပ်သောဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုကင်းသောကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်းခံရသောအခါသင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဆာဗာကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။ ဒါမယုံနိုင်စရာပါ! ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုအပြည့်အ ၀ ထိန်းချုပ်ထားလို့ရတယ်။ အင်တာနက်ပေါ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာသတင်းအချက်အလက်တွေရဲ့ privacy နဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေအတွက်အရေးကြီးတယ်။ ငါစိတ်မကောင်းမဖြစ်စေရန်ကြိုးစားရန်အကြံပေးလိုပါသည်။ လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘုတ်အကောင့်ကိုပိတ်ခဲ့ပြီးအခြားတစ်ခုဖန်တီးရန်ရည်ရွယ်ချက်အနည်းဆုံးမရှိပါ။
KZKG ^ Gaara ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမရှိသော D * (ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ချစ်ခင်စွာဖြင့် :)) Diaspora တွင်ဆာဗာများစွာရှိသည်။ လူသိအများဆုံးစာမျက်နှာမှာ http://www.joindiaspora.comသို့သော်စာမျက်နှာပေါ်တွင် http://podupti.me/ ၎င်းတို့တွင် D * ဆာဗာအားလုံး၏စုစည်းမှုရှိသည်။ ရှင်းလင်းချက် - ဆာဗာအားလုံး (ကျွန်ုပ်တို့ Pods ဟုခေါ်သည်) သည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအနေဖြင့်ကျန်ကြွင်းသောသီးတောင့်များနှင့်သင်မဆက်ဆံနိုင်ဟုမဆိုလိုပါ။ အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်
Identi.ca နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ဟာ Twitter မှာ Identi.ca မှာရေးထားတဲ့အရာတွေကိုပုံတူပွားနိုင်တယ်။ 🙂
diaspora URL အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်ဘာမှမသိပေမယ့်သိပ်မကောင်းဘူး sound
အဓိကအချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ ISP သည်၎င်းလူမှုရေးကွန်ယက်ကိုဝင်ရောက်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးရှုပ်ထွေးမှုသို့မဟုတ်ယုတ္တိမတန်သောကြောင့်၎င်းသည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုရှင်းပြရန်ကျွန်ုပ်မကြိုးစားပါ (သို့မဟုတ်၊ HAHAHA) မဟုတ်ပါ၊ ခေါ်ပါ
ကျွန်တော်တို့ကို Diaspora နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ဘယ်နည်းလမ်းမဆိုအကြံပေးချင်ပါသလား။ ဒါဆိုငါတို့ထုတ်ဝေတဲ့အရာအားလုံးကိုလည်းအဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်ထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှာလား။
Identi.ca နှင့် Twitter အကြောင်း ၄ ရက်ခန့်ကျွန်ုပ်တို့ "Twitter" နှင့်ချိတ်ဆက်ခဲ့သည့်နည်းလမ်းသည်အလုပ်မလုပ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့် our ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့၏တွစ်တာအကောင့်နှင့်ထပ်တူပြုရန်မည်သည့် plugin ကိုသင်အကြံပြုမည်နည်း။
မင်္ဂလာပါ၊ တကယ်ပဲ၊ ကျွန်ုပ်သူငယ်ချင်းအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်😉
မျှော်လင့်ပါသည်။ သို့သော် @ KZKG ^ Gaara ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏ ISP များသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသို့ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုပိတ်ဆို့ထားပါသည်။ လူမှုကွန်ယက်…
D * ကိုဘလော့နှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ရန်နည်းလမ်းရှိမရှိကျွန်ုပ်မသိပါ။ လုပ်နိုင်တာက Twitter ကို Diaspora နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ငါမှန်ကန်စွာမှတ်မိမယ်ဆိုရင်ဒါဟာ Diaspora သဘောအရချိတ်ဆက်ထားတာပါ။ တွစ်တာမဟုတ်ဘဲအခြားနည်းလမ်းတစ်ခုမဟုတ်တာပါ။ (ဒါကယုတ္တိဗေဒသက်ရောက်မှုများကိုဟန့်တားနိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့် hahahaha) တစ်ခုခုထုတ်သူတို့ကိုမှာအချို့သောဒေတာပစ်။
ပြီးတော့ WP အတွက် Plugins - ငါမင်းကိုအကြံပေးနိုင်တယ် http://wordpress.org/extend/plugins/simple-twitter-connect/ ငါတစ်ချိန်ကအလုပ်တစ်ခုအတွက်အသုံးပြုတဲ့ plugin ကို။ 🙂
ISP ပိတ်ပင်တားဆီးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ငါလက်သည်မည်သည့်နေရာမှလာသည်ကိုငါစိတ်ကူးသည်။ ဟားဟား။
သူတို့ TOR သိလားမသိဘူးလား (https://www.torproject.org/ ISP block များကို evading လုပ်ခြင်းသည်အဘယ်နည်း။ ISP သည်ငါ၏ ports များကိုပိတ်ဆို့သောအချိန်နှင့် navigation သည်အနည်းငယ်နှေးသော်လည်းသင် block များကိုအချည်းနှီးသာကျော်သွားသည်။ သင်ပို့၊ လက်ခံသည့်ဒေတာအားလုံးကိုစာဝှက်ထားသည် ... 😛
unzip နှင့်အသုံးပြုရန် Bundle version ရှိသည်။ https://www.torproject.org/dist/torbrowser/linux/tor-browser-gnu-linux-i686-2.2.34-3-dev-es-ES.tar.gz (၃၂ bits အတွက်)
https://www.torproject.org/dist/torbrowser/linux/tor-browser-gnu-linux-x86_64-2.2.34-3-dev-es-ES.tar.gz (၃၂ bits အတွက်)
၎င်းကိုအလုပ်မလုပ်ကြည့်ဖို့ကြိုးစားပြီးမှတ်ချက်ပေးပါ။ အကယ်၍ မရလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လှည့်ကွက်ကို ဆက်၍ ရှာနေသည်။ 🙂
Tor အကြောင်း haha ​​ဟုတ်ကဲ့၊ Vidalia, JAP နှင့်အခြားသူများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ ပြproblemနာမှာ X site သည်ထိုစာရင်းတွင်မပါရှိပါက site အဖြူရောင်စာရင်းမှအုပ်ချုပ်သော proxy server ကို ဖြတ်၍ သွားလာခြင်းဖြစ်သည်။ ငါတို့မဝင်ရဘူး။
တစ်နည်းပြောရလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အဖြူရောင်စာရင်းရှိပါက TOR ဆာဗာတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်၊ ဥပမာ၊ အာဂျင်တီးနားတွင်၊ အနက်ရောင်စာရင်းတွင်မပါဝင်ပါ။ သင်လုံခြုံစွာသွားလာနိုင်ပြီးစာဝှက်ရန်လိုသည်။ ပြီးတော့ဒီကနေသင်ကွန်ယက်ရဲ့ကျန်အပိုင်းကိုသွားလိမ့်မယ်။ သူတို့ကြိုးစားခဲ့သလား။
@ KZKG ^ Gaara သတင်းကောင်း။ သတင်းကောင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ISP ကထိုလူမှုကွန်ယက်များသို့ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုငြင်းပယ်လိုက်သည်က ၀ မ်းနည်းစရာဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဟေးသင်တတ်နိုင်သမျှလုပ်ပါ ....
Look Diaspora che၊ လွန်ခဲ့သောနှစ်များစွာက Face I ၏စန်းပြမှုနှင့်အတူ Facebook သည်ပိုမိုလုံခြုံသောကြောင့် Facebook ကိုဖျက်ဆီးနိုင်မည့်လူမှုရေးကွန်ရက်အသစ်တစ်ခုပေါ်လာတော့မည်ဟူသောဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်ုပ်ဖတ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ပုံများသည် P2P စတိုင်အလုပ်လုပ်သောကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်ဖြစ်သည်။ စပွန်ဆာကြီးတွေဆီကအထောက်အပံ့တွေရခဲ့တယ်၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေအုပ်စုကလည်းဖန်တီးခဲ့တယ်၊ ဒီစီမံကိန်းကိုဒိုင်ယာပိုရာလို့ခေါ်တယ်၊ အချိန်တွေကုန်လွန်သွားတယ်၊ ငါသူ့နာမည်ကိုထပ်မံကြားရသေးတယ်။
ကျွန်ုပ်သည် Fromlinux မှဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သို့အချိန်ကြာမြင့်စွာမရရှိနိုင်သည့်တိုင်တွစ်တာတွင်အမြဲတမ်း update လုပ်သောကြောင့်သင် Facebook အတွက် plugin ကိုပြန်လည်သုံးသပ်သင့်သည်။
၎င်းသည်ပလပ်အင်မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည် Facebook.com မှအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုသာဖြစ်ပြီး၊ RSS ကို သုံး၍ ဆောင်းပါးအသစ်များကိုဖတ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ FB စာမျက်နှာတွင်ထည့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဘာမှမ🙁 that
cache ကိုဘယ်လိုရှင်းလင်းမလဲ MB MB RAM ကိုဘယ်လိုရယူမလဲ